တရုတ်သံတုံး နလပိန်းတုံး အစုံ ဖုတ်စက်ရုံ နှင့် ရောင်းချသူများ |Yunlingyu
ကုန်ပစ္စည်းကုဒ် : YLY – 41 LB
လက်ကိုင်အချင်း: 1 လက်မ
လက်ကိုင်အရှည်: 14 လက်မ
အခြား ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: 18*9*7cm
လက်ကိုင်အနံ: 1 လက်မ
1. အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ နလပိန်းတုံးများကို လေ့ကျင့်ပါ၊ ကြွက်သားလိုင်းကို ပြုပြင်နိုင်သည်၊ ကြွက်သားခံနိုင်ရည်ကို တိုးစေသည်။လေးလံသော နလပိန်းတုံးလေ့ကျင့်ခန်းများကို မကြာခဏပြုလုပ်ပါ၊ သင့်ကြွက်သားများကို သန်မာစေကာ ကြွက်သားမျှင်များကို မြှင့်တင်ပေးကာ ကြွက်သားသံကို တိုးစေသည်။
1. အိပ်ထမတင်လုပ်နေစဉ် လည်ပင်းနောက်ဘက်တွင် လက်နှစ်ဖက်လုံးနှင့် ခါးနှင့် ဝမ်းဗိုက်ရှိ ကြွက်သားများကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ပြီး ဝမ်းဗိုက်လေ့ကျင့်ခန်းကို မြှင့်တင်နိုင်သည်၊ နလပိန်းတုံးကို ကိုင်ထားကာ ဘေးဘက်ကွေး သို့မဟုတ် လှည့်ခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပ ထောင့်ဖြတ် ကြွက်သားများကို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နိုင်သည်၊ လက်နလပိန်းတုံးကို ရှေ့တည့်တည့် လက်မောင်းနှင့် ဆန့်ထုတ်ကာ ပခုံးနှင့် ရင်ဘတ် ကြွက်သားများကို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နိုင်သည် ။ခြေလက် အောက်ပိုင်း ကြွက်သားများ ဖြစ်သည့် နလပိန်းတုံးများ ကိုင်ဆောင်ကာ ခြေဖဝါး လေးခွထိုင် ခုန်ချခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
3. [Safe Design] : လုံခြုံပြီး ချော်လဲလွယ်သော အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ကြမ်း။အလေးချိန်ပြားများကို နလပိန်းတုံးတုံးများအတွင်း လုံခြုံစွာ လုံခြုံအောင် လုံခြုံစေရန်အတွက် ကလစ်များတွင် ဝက်အူလေးခုပါရှိသည်။barbell နှင့် dumbbell ကွဲပြားမှုအကြားပြောင်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
4. [လွယ်ကူစွာ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်း]- လိမ်ယန္တရားနည်းပညာဖြင့် ရိုးရှင်းစွာ တပ်ဆင်ရန်နှင့် ဖြုတ်တပ်ရန် ရိုးရှင်းပါသည်။တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းကို နေရာအနည်းအကျဉ်းဖြင့် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ သယ်ယူရလွယ်ကူပြီး အိမ်တွင်းအားကစားခန်းမအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်။
ချိန်ညှိနိုင်သော Dumbbell/ Barbell သတ်မှတ်
အလေးချိန်ရွေးချယ်စရာများစွာဖြင့် အလွယ်တကူချိန်ညှိနိုင်သော Dumbbell / Barbell အစုံ။စုဝေးရန်နှင့် ချိန်ညှိရန် မြန်ဆန်လွယ်ကူသည်။အလေးချိန်အမျိုးမျိုးအတွက် အလွယ်တကူ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အလေးချိန်ပြားများ တပ်ဆင်ထားသည်။ထို့အပြင်၊ barbell တစ်ခုဖန်တီးရန် နလပိန်းတုံး2ခုနှင့် bar extensioner တစ်ခု ပါဝင်သည်။
ယခင်- dumbbell ဖုတ်
နောက်တစ်ခု: ဆဋ္ဌဂံရော်ဘာ coating နလပိန်းတုံး
Dumbbell Plate Yoga Training လက်မောင်း ရေနွေးအိုး bell La...
OEM China China 2021 ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ခြင်း အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်း...
ဆဋ္ဌဂံရော်ဘာ coating နလပိန်းတုံး
DLS ရာဘာ coated fixed dumbbells
ချိန်ညှိနိုင်သော Dumbbell Set ၊ Weight Lifting